Factory - Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd.
Ny orinasanay dia mampihatra tanteraka ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001 sy ny rafitra kalitaon'ny fitaovana fitsaboana ISO13485, ary mampihatra fanaraha-maso telo amin'ny famokarana: fizahana ara-nofo, fanaraha-maso ary fanaraha-maso ny ozinina; ny fepetra toy ny fandinihan-tena, ny fanaraha-maso ary ny fanaraha-maso manokana dia raisina ihany koa mandritra ny famokarana sy ny fivezivezena mba hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra. Hamarino fa voarara tsy hivoaka ny orinasa ny vokatra tsy mendrika. Mandamina ny famokarana ary manaterà vokatra mifanaraka tsara amin'ny fepetra takian'ny mpampiasa sy ny fenitra nasionaly mifandraika amin'izany, ary hiantohana fa ny vokatra atolotra dia vokatra vaovao sy tsy ampiasaina, ary vita amin'ny akora fototra sy ny haitao mandroso mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra, ny pitsopitsony ary ny fahombiazany. Entina amin'ny fomba sahaza azy ireo entana.
Politika kalitao, tanjona kendrena, fanoloran-tena
Mpanjifa aloha; kalitao voalohany, fanaraha-maso henjana fifehezana, hamoronana marika kilasy voalohany.
Mahatratra 100% ny fahafaham-pon'ny mpanjifa; mahatratra 100% ny taham-panaterana ara-potoana; ny hevitry ny mpanjifa dia voahodina ary ny hevitra 100%.
Mba hifehezana tsara ireo anton-javatra misy fiatraikany amin'ny haitao vokatra, ny fitantanana ary ny mpiasa, ary hisorohana sy hanafoanana ireo vokatra tsy manara-penitra, ny orinasa dia nanomana sy namorona rafitra antontan-taratasy momba ny kalitao ary nampihatra azy ireo mafy mba hiantohana ny antoka ara-kalitao. Miasa hatrany ny rafitra.
Fanaraha-maso ny endrika
Manaova drafitra sy manatanteraka famolavolana sy fampivoarana ny vokatra mifanaraka amin'ny fandaharan'asa fanaraha-maso ny famolavolana mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly sy ny fepetra takian'ny mpampiasa ny vokatra.
Fanaraha-maso ny antontan-taratasy sy ny fitaovana
Mba hihazonana ny fahamendrehana, ny marina, ny fitoviana ary ny fahombiazan'ny antontan-taratasy sy akora mifandraika amin'ny kalitaon'ny orinasa, ary mba hisorohana ny fampiasana ireo antontan-taratasy tsy manara-penitra, mifehy tanteraka ny antontan-taratasy sy ny fitaovana ny orinasa.
Mba hahafeno ny fepetra takiana kalitaon'ny vokatra farany an'ny orinasa, ny orinasa dia mifehy fatratra ny fividianana akora sy fanampiana ary ny faritra ivelany. Fehezo tsara ny fomba fanamarinana ny mari-pahaizana mpamatsy sy ny fomba fividianana.
Famantarana ny vokatra
Mba hisorohana ny akora manta sy fanampiny, ny ampahany novidiana, ny vokatra vita semi ary ny vokatra vita tsy mifangaro amin'ny famokarana sy ny fivezivezena, dia namaritra ny fomba famaritana ny vokatra ny orinasa. Rehefa voafaritra ny fepetra takiana amin'ny fanarahana dia tokony ho fantatra tokana ny vokatra na ny vokatra.
Fanaraha-maso ny dingana
Ny orinasa dia mifehy tsara ny fizotra tsirairay izay misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny vokatra amin'ny fizotry ny famokarana mba hahazoana antoka fa mahafeno ny fepetra takiana ny vokatra farany.
Mba hanamarinana raha toa ka mahafeno ny fepetra takiana ireo singa tsirairay amin'ny fizotran'ny famokarana, dia voafaritra ny fitakiana sy ny fitiliana ary takiana ireo rakitra.
Fanaraha-maso ny fitaovana fanaraha-maso sy fandrefesana
Mba hiantohana ny fahamarinan'ny fanaraha-maso sy ny fandrefesana ary ny fahamendrehana ny sanda, ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny famokarana, ny orinasa dia mamaritra fa ny fitaovana fanaraha-maso sy ny fandrefesana dia tokony hofehezina sy hojerena. Ary manamboatra mifanaraka amin'ny fitsipika.
Ny fahatsiarovan-tena momba ny kalitao dia ampidirina amin'ny lafiny rehetra amin'ny HMKN
Ny ekipa fanaraha-maso kalitao manana traikefa an'ny orinasa dia manaraka ny fenitra fitsirihana indostrialy avo indrindra an'ny IQC, IPQC ary OQC hahazoana antoka ny kalitaon'ny vokatra avo lenta.
Fanaraha-maso ny vokatra tsy manara-penitra
Mba hisorohana ny famoahana, ny fampiasana ary ny fanaterana ireo vokatra tsy manara-penitra, ny orinasa dia manana fitsipika henjana momba ny fitantanana, ny fitokanana ary ny fitsaboana ireo vokatra tsy manara-penitra.
Fomba fanitsiana sy fisorohana
Mba hialana amin'ny anton-javatra tena izy na mety tsy voamarina dia mamaritra mafy ny fepetra fanitsiana sy fisorohana ny orinasa.
Fitaterana, fitehirizana, fonosana, fiarovana ary fandefasana
Mba hiantohana ny kalitaon'ny fividianana vahiny sy ny vokatra vita, ny orinasa dia namolavola antontan-taratasy henjana sy voarindra amin'ny fanodinana, fitehirizana, fonosana, fiarovana ary fandefasana ary voafehiny fatratra.